कोरना भाइरसको संक्रमणवाट बचाउन , क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि आफ्नो घर सित्तैमा दिदै मनकारी नेपाली ! – Etajakhabar
कोरना भाइरसको संक्रमणवाट बचाउन , क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि आफ्नो घर सित्तैमा दिदै मनकारी नेपाली !
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना भाइरस को त्रास फैलिरहेको बेलामा नेपालमा पनि सजगता अपनाइएको छ । नेपालमा अहिले सम्म कोरोनाको संक्रमण नदेखिएपनि भित्रिन नदिन सावधानी अपनाइएको छ । सरकारले औषधी र अस्पतालको ब्यवस्था गरेको जनाएको छ । सरकारलाई कोरोना विरुद्ध सजगता अपनाउन सहयोग गर्दै स्थानिय तवरवाट पनि आह्रवान हुन थालेको छ । काठमाडौंमा हुन सक्ने कोरोनाको संक्रमणवाट बचाउन काठमाडौंका २ जना घरधनीहरुले आफुहरुको घरलाई नै क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आह्रवान गरेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको लडाई सरकारको मात्र नभएर सर्वसाधारणको पनि दायित्व भन्दै उनीहरुले आफ्ना घरलाई क्वारेन्टाइनक रुपमा प्रयोग गर्न आह्रवान गरेका हुन् । कोरोनाको आशंका गरिएका ब्यक्तिलाई १४ दिन सम्म राख्न आफ्ना आलिशान भवनलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं सिफलका चिराग गोयल र कुलेश्वरका लाल चन्द्र गौतमले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा आफ्ना ति घर सार्वजनिक गर्दै क्वारेन्टायनमा बस्न निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । आलिशान देखिने ति घर सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काठमाडौंको सिफल स्थित आफनो आलिशान घर देखाउँदै चिराग गोयलले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘यो सिफल, काठमाडौंमा रहेको हामो खाली घर हो । एक विदेशीले काठमाडौंमा एक्लै बस्नको लागि ठाउँ खोजिरहेको र होटलमा बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पोस्ट देखे,’ ‘त्यसैले हामीले हाम्रो घरलाई १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधिको लागि निःशुल्क रहन (बस्न) दिने निर्णय लिएका छौं ।’
गोयलले आफ्नो घरमा ९ वटा कोठा रहेको र २ वटा छतहरुलाई पनि कोठा बनाउन सकिने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले कोरोना भाइरससँग लड्न सरकारले सबैलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरुले सहयोग गर्न लागेको बताएका छन् । उनले अझै अगाडी बढेर भनेका छन् कोरोनासंग जुध्नका लागि सरकारले चाहे आफ्नो खाली घरलाई अस्थायी अस्पताल बनाउन चाहे पनि उपलब्ध गराउन चाहन्छु ।
यसैगरी लालचन्द्र गौतमले पनि कुलेश्वरस्थित आफ्नो घर क्वारेन्टाइनका लागि दिने बताएका छन्। उनले पनि फेसबुकमै आफ्नो चार तले घरको फोटो पोस्ट गर्दै आइसोलेसनमा बस्न आवश्यक परेकालाई निःशुल्क दिने उल्लेख गरेका छन्।
आफूहरू भैंसेपाटीमा बस्ने र यो घर बेच्ने तरखरमा रहेका लालचन्द्रले यो निर्णय पारिवारिक छलफलपछि लिएको बताउँछन्। ‘केही समययता घर खाली थियो। संसारभर संकटकाल लागेको समयमा आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सानो सहयोग गरेका हौं,’ लालचन्द्रले सेतोपाटीसँग भने, ‘मिडियामा आउने सोच गरेर यो व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिएको होइन। आवश्यक परेकाहरूलाई विपदबेला सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य हो।’ उनलाई आफ्नो घर कोरोनाबाट संक्रमित होला भन्ने चिन्ता छैन। त्यस्तो सोच राख्नु पनि गलत मान्छन्।
‘मान्छेहरूले अनावश्यक डर पैदा गरिरहेका छन्। केही होटलले कोठा समेत दिएका छैनन् रे,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला सरकारको काममा भर परेर मात्र हुन्न। आफूसँग भएका स्रोत जरुरी व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याएर उपयोग गर्नुपर्छ।’
कुलेश्वरस्थित तीन तले घरमा दुइटा सामानसहितको बेडरुम, दुई किचन, दुई लिभिङ रुम र तीन वटा खाली कोठा रहेको उनले जानकारी दिए। संसारभर कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै सरकारले सर्वसाधारणलाई भिडभाडमा नहिँड्न र घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको थियो।
‘परिस्थिति गम्भीर भयो भने सरकारले मात्र सबैलाई सहयोग गर्न सक्दैन,’ चिराग भन्छन्, ‘त्यसैले यदि कुनै सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थाले अस्थायी अस्पताल बनाउन चाहन्छ भने म यसलाई निःशुल्क दिनेछु।’ उनी भन्छन्, ‘यो चर्चा कमाउन गरेको काम होइन। विश्वमा भइरहेको आपतकालीन समयमा आफूबाट हुनसक्ने सानो सहयोगको प्रयास हो।’
लालचन्द्रले पनि अस्थायी अस्पतालका लागि दिनसक्ने बताएका छन्। चिराग र लालचन्द्रको घरमा आइसोलेसन बस्नेले खानपिनको व्यवस्था भने आफैं गर्नुपर्नेछ। तर सहयोगका लागि आह्वान गर्न भने सकिनेछ।
Posted on: Wednesday, March 18, 2020 Time: 11:19:49
-13737 second ago
-13022 second ago
-11551 second ago
-7343 second ago
-3953 second ago
-3051 second ago